2017 #NABShow ပါတီစာရင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » 2017 #NABShow ပါတီစာရင်း
ကျနော်တို့က 2017 ဖော်ပြထားခြင်းမထားဘူးဆိုရင် NAB ပြရန် ပြီးနောက်-ပါတီများ, ကျနော်တို့ NAB ပြရန်နှင့်အတူဆက်စပ်ပျော်စရာ၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကွညျ့ရှုနှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ NAB ပြရန် အချို့သာဖိတ်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုပုံဖြစ်စေပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်တစ်ဦးဝန်ခံချက်တာဝန်ခံရှိသည်အဖြစ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အပါတီအသေးစိတ်ကို။ ဒါဟာသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပြေးစာရင်းနှင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံပါ! ကျွန်တော်ရှာတွေ့သို့မဟုတ်အချက်အလက်လက်ခံရရှိအဖြစ်ကျနော်တို့ကို update ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေလုပ်နေအရာတခုကတော့ NAB ပြရန် ပါတီစာရင်းအပေါငျးတို့သညျအခွားနှင့်အတူကကို update ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် ပြီးနောက်-ပါတီများ (တရားဝင်နှင့်တရားမဝင်!) ။ ကျွန်တော်တို့၏ NAB ပြရန် ပါတီစာရင်း setup ကိုဖြစ်ပါတယ် သငျသညျညစဉ်ညတိုင်းအများအပြားပါတီများ hit နိုင်အောင်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်! ပိုပြီးဖြစ်ရပ်များရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ Re-ပို့စ်ကဒီကိုစောင့်ရှောက်မည်! စာရင်း updated ခံရဖို့မျှော်လင့်ထား အဆက်မပြတ်!
ဒီကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါစို့ 2017 NAB ပြရန် ပါတီစာရင်း!
နေ့စှဲ အချိန် ဘယ်မှာ အကြောင်းအရာ
စနေနေ့, ဧပြီ 22
တရားမဝင် 8: 00 - 11: 00 ညနေ ဂေါ်ဒွန် Biersch ဤသည်ပြပွဲ 400 ဧည့်သည်များန်းကျင်နှင့်အတူထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကနေလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူ network တစ်ခုစံပြအခွင့်အလမ်းကစတင်ခဲ့သည်နှင့်မီတက်ရောက်ရန်ကွန်ယက်ဖြစ်ရပ်ဒါရိုက်တာများ, VPS, စီအီးအို, မိတ်ဖက်များနှင့်မန်နေဂျာများ၏ထလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ IABM အသင်းဝင် လိုအပ်.
တနင်္ဂနွေ, ဧပြီ 23
အရာရှိ 6: 00 -? ညနေ Encore ဟိုတယ်, 3131 Las Vegas မှ Blvd. တောင်ပိုင်း, Las Vegas မှာ, NV 89109 Showstoppers မီဒီယာ Reception - သာလျှင်ဖိတ်ကြားလွှာ - အချက်အလက်များ: ဒီမှာ
အရာရှိ 6: 00 - 8: 00 ညနေ O'Shea ရဲ့ကာစီနို, 3535 S ကို Las Vegas မှ Blvd, Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး 89109 + အပြာရောင်ကော်လာ Post ကိုစုပေါင်း #PostChat NAB ပြရန် mega တွေ့ဆုံ-Up ကို။ အဲဒီအစားသူကရှိပြီးသားတဦးတည်းကြီးတွေပေါ့ပေါ့ဆွဲထားဘို့ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းစပ်ပြီးနေသည်ထက် ပို. ပင်သင်၏လူမှုပြက္ခဒိန်ကိုဖျက်ဆီးကြောင်း discrete တွေ့ကြံ-ups အတွက်။ အဘယ်သူမျှမ Raffles မရှိကြေညာချက်များ, NAB ၏အကြိုနှင့်လက်လှမ်းမမီအတွင်း bar ပေါ်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှုမလိုလားပဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ ပိုများသောအင်ဖို ဒီမှာ
အရာရှိ 7: 00 -? ညနေ အဆိုပါလေကြောင်းဘား အဆိုပါ Stratosphere မျှော်စင်, အဆင့် 108 မှာ
2000 Las Vegas မှ Blvd. တောင် အဆိုပါ Colorist ရောနှောထားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ့ဆုံ & ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။ Colorists, အယ်ဒီတာများ, DPS, ဒါရိုက်တာများနှင့် DITs (ပေါင်းဟာသူတို့ရဲ့လက်ထောက်) နှင့်သူတို့ကိုအစေခံသူရောင်းချသူအားလုံးအကြီးစကားပြောဆိုမှု, အစားအသောက်နှင့်သောက်၏ညနေခင်းဘို့ရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ ဒါဟာ NAB မှာသင်၏အချိန်ကိုချွတ်ကန်မယ့်စိတ်အေးလက်အေးလမ်းဖွင့် ... လက်မှတ်တွေ ဒီမှာ
အရာရှိ 8: 00 - 11: 00 ညနေ Omnia ကဲသာဘုရင်၏နန်းတော် @ SVG ပံ့ပိုးကူညီခြင်းကိုကုမ္ပဏီများကတင်ဆက်ခြင်း, NAB Pre-ဂိမ်းပါတီလူတိုင်း၏ NAB ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-stop ဖြစ်ပါတယ်။ SVG အဖွဲ့ဝင်များ, စပွန်ဆာများနှင့်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဧည့်သည်များ join Las Vegas မှ '' ဝန်ကြီးချုပ်ညဥ့်ကလပ်အသင်းများထဲမှမှာကော့တေး၏တညဉ့်အဘို့။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒီမှာ
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 24
အရာရှိ 4: 00 - 5: 30 ညနေ Booth N5324 FilmTrack ပျော်ရွှင်သောနာရီ
အရာရှိ 5: 30 - 10: 00 ညနေ Monte Carlo ဟိုတယ် @ 3770 Las Vegas မှ Blvd. တောင် ပထမဦးဆုံး IMUG 1998 တှငျကငျြးပခဲ့ MediaMotion Ball ကို Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အပျက်, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်, 3D နှင့် NAB မတက်ရောက်ထုတ်လုပ်မှုလယ်ပြင်၌မည်သူမဆိုယခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်တွေ ဒီမှာ
တရားမဝင် 5: 30 - 7: 30 ညနေ Booth #C2495
(ဘယ်လ်ဂျီယံ & ဘာသာစကား Bavarian Pavilion အနီးရှိဗဟိုခန်းမ,) Atomos ကွိုဆိုပါတီ (သို့အလည်တစ်ခေါက် ATOMOS က်ဘ်ဆိုက် ဒီမှာ)
အရာရှိ 4: 30-5: 30 ညနေ Booth N313VR NAB ပြရန် မင်္ဂလာနာရီ
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 25
အရာရှိ 7: 30 နံနက် နေဝင်ချိန်ပန်းခြံ, 2601 အီးနေဝင်ချိန်လမ်း။ , Las Vegas မှာ, NV 89120 4K 4Charity - 4K Run ကိုအင်ဖို
အရာရှိ 4: 30 - 11: 00 ညနေ ရီယိုဟိုတယ်, Pavilion Ballroom ဒါဟာမပါဘဲ NAB ဖြစ်မဟုတ်ဘူး Supermeet - သူတို့ရဲ့ 16th တစ်နှစ်ကိုဂုဏ်ပြုသော. အလေးအနက်ထား - သငျသှားဖို့လိုအပျသ - ကအတွေ့အကြုံကိုပဲ! အဆိုပါ MMB ထံမှအတော်များများကလူအတော်များများရှိလိမ့်မည်!
အရာရှိ 6: 00 - 8: 00 ညနေ AquaKnox Venetian- အ Hotel3355 တောင်ပိုင်း Las Vegas မှ Boulevard, Las Vegas မှာ, NV 89109 အတွက် အဆိုပါမှာအလုပ်ရှုပ်နေနေ့ကပြီးနောက် NAB ပြရန်, လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာ appetizers နှင့်အချိုရည်တစ်ပျော်စရာညဦးယံအချိန်များအတွက်ဗီဒီယိုနည်းပညာကိုအများဆုံးဆန်းသစ်သည့်ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်း ... RSVP လိုအပ်ပါသည်: Aquaknox RSVP
တရားမဝင် 6: 00 - 9: 30 ညနေ Satay ထိုင်းဘစ်စထရို, 3900 ပရဒိသုလမ်း, Suite N ကို
Las Vegas မှ, NV 89169 အဆိုပါ 27th နှစ်ပတ်လည် NAB ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ပါတီ - လျှို့ဝှက်စကားများ: "ပိုပြီးရောင်စဉ်" (ဘူဖေး7မှာဖွင့်လှစ်: 00pm) နောက်ထပ်အင်ဖို ဒီမှာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 26
အရာရှိ 4: 00 - 5: 00 ညနေ Booth N6513AD NAB ပြရန် မင်္ဂလာနာရီ
အရာရှိ 4: 00 - 6: 00 ညနေ Booth SU7607 Peer5 + hls.js အားဖြင့်မင်္ဂလာနာရီ
အရာရှိ 6: 00 - 8: 00 ညနေ Westgate Las Vegas မှ Resort & Casino (ယခင်က LVH - Las Vegas မှာဟိုတယ် & ကာစီနို) - Westgate Ballroom က B ကို
အဆိုပါအပျော်တမ်းရေဒီယိုလုပ်ငန်းရှင်များ Reception, ရေဒီယိုအပျော်တမ်းအသိုင်းအဝိုင်းများ၏မိတ်သဟာယဖွဲ့ခံစားခြင်းနှင့်မယုံနိုင်စရာဆုအနိုင်ရတစ်စိတ်အေးလက်အေးညနပေိုငျးပြောနေတာဆိုင်များအတွက်အသံလွှင့်မယ့်အကောင်းဆုံးနဲ့တောက်ပရာပေါင်းများစွာထားပါတယ်။ ပိုများသောအင်ဖို ဒီမှာ
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 27
အရာရှိ 12: 30 - 1: 30 ညနေ Booth N313VR NAB ပြရန် မင်္ဂလာနာရီ
ငါ MY AfterParty စာရင်းနှင့်အတူလုပ်နေတာပေါ့အရာတခုကတော့သင်တစ်ဦးအတွက်အများအပြားထိမှန်နိုင်အောင်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်စာရင်း, ငါကအားလုံးအတွက် AfterParties တစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်းဖြစ်ဘို့အလို့ငှာ, ဖြတ်ပြီးလာအပေါငျးတို့သညျအခွား AfterParties အတူကကို update ဖြစ်ပါတယ် ညဥ့်! ငါ add-၌ရှိသကဲ့သို့ပိုပြီး AfterParties ငါဒါကြောင့်ကျနော်တို့ NAB ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့ဘလော့ထွက်စစ်ဆေးနေစောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေပါ, ဒီ Re-ပို့စ်တင်စောင့်ရှောက်မည်!
မှတ်စု: တချို့ကပါတီများလျော့နည်းတရားဝင်ပါ၏ သို့သော် Las Vegas မှာနိုက်ကလပ်၌ရှိသမျှသောဧည့်သည်များ 21 နှစ်သို့မဟုတ်အသက်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားနှင့်အတူအဟောင်းတွေဖြစ်နှင့်သင့်လျော်သော Dress ကုဒ်များလိုက်နာရမည်: ဆိုလိုသည်မှာ NO ဘောင်းဘီတို, Sneaker, လှန်လာသောသေတ္တာ, t-ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ဦးထုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် လူကြီးလူကောင်းများအတွက်လျှော့ / ဂျင်းဘောင်းဘီ, collared ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပိတ်ထားသောခြေချောင်းစားဆင်ယင်ဖိနပ်လိုအပ်သည်။ စက်ရုံမီးကုဒ်စွမ်းရည်ကြောင့်တစ်ဦးဝန်ခံချက်ကိုင်မှာပါလျှင်နိုက်ကလပ်နာယကဝန်ခံလို့မရပါဘူး။ အားလုံး entry ကိုတယောက်နဲ့တူပါတယ်သမ္မာသတိမှာဖြစ်ပါတယ်။
2016 NAB ပြရန် 2017 NAB ပြရန် 2017 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2017 NAB ပြရန်သတင်းများ 2017 NAB ပြရန်ပါတီများ AfterParties ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2017 အဖွဲ့ NAB NAB ပြရန်ပါတီများ NAB Show ကိုပါတီ NAB17 nabshow ပါတီတွေက ပါတီ 2017-04-18
ယခင်: High-ပါဝါနှင့်အတူ APT Panel ကိုအင်တင်နာ, 2017 NAB Show မှာ Broadband စှမျးပွဲဦးထွက်မှ Dielectric
နောက်တစ်ခု: Comprimato Telestream နှင့်အတူ JPEG2000 မိတ်ဖက်ကိုတိုးချဲ့